Ny doll-motanka dia amalka izay heverina ho mariky ny kolontsaina Slavy. Maro no mino fa manana hery manokana izy izay afaka mihazona fifandraisana amam-panahy sy fitiavana, manatsara ny toe-javatra misy azy, manatanteraka ny faniriany, sy ny sisa.
Amin'ny ankapobeny, misy karazana saribakoly, môtô maro , saingy amin'ny ankapobeny dia mitovy ny fomba famokarana azy ireo.
Ahoana ny fomba fanaovana miloko doll-motanku?
Ny fanaovana saribakoly dia mila maka fotsy na volon'ondry fotsy, amin'ny ankapobeny dia tokony ho voajanahary ny fitaovana. Chintz dia hitafy akanjo. Alaivo koa ny kofehy mena, ny kofehy ary ny firavaka hafa. Raha manao saribakoly ianao, dia tsy afaka mampiasa fanjaitra, toy ny fitsipika, efa mazava tsara amin'ny lohateny.
Makà lava lava lava ary aforeto amin'ny tavy mafy, izay ho fototry ny loha. Vovobonin'ny lelafo na kôkôsy marobe ary miforitra toy ny kitapo. Ampiasao ny kofehy fotsy, alamino ny loha ary ataovy ny tendany.
Mitefina loko manga sy manga, ataovy lakroa masina eo amin'ny tarehy. Io marika io dia manana hery lehibe sy lanjany. Hevero fa manan-danja ny rivotra, mamerina ny fihetsiky ny Masoandro ary manamboatra rivotra mahatsikaiky. Afaka mampiasa birao manokana ianao.
Manohy amin'ny tanany manokana izy mba hanao fiarandalamby-motanku, manodinkodina ny fitaovana voafidy roa teboka misy loko samy hafa ary mampifandray amin'ny fanaovana lakroa. Ny fametahana ho toy ny famantarana famantarana masoandro - Lakroa. Ho vokatr'izany, dia hampiorina ny fotony sy ny tanana ianao.
Avy eo dia mampifandray ny kofehy sy ny loha.
Maka tady misy loko miloko ary manapaha elanelan-tongotra lava eo afovoany, ary eo afovoan-tanàna, dia farito ny boribory. Apetraho eo amin'ny tapany ambony amin'ny vombony izany, hiverina ny fikoropahana. Mba hanamafisana ny lobaka, ampiasao ny rivotra manodidina ny tady sy ny basy mba hamehezana eo amin'ny tananao.
Raiso tsangambato roa lehibe, ataovy ny volo ambany sy ambany.
Raha tianao, azonao atao ny manamboatra akora sy ny firavaka hafa.
Mbola maka kitapo fotsiny izy io ary afatory amin'ny lohany. Sombiny manokana manondro ny fifandraisana amin'ny lanitra izany.
Plots ao amin'ny Trinite ny fanambadiana
Magika fotsy ho an'ny vola sy ny vintana
Karazan-tsakafo ho an'ny olona tsirairay
Fivoriana fampakaram-bady virjiny taloha
Plots amin'ny Krismasy ho an'ny fanambadiana
Trondro anaty foitra ao anaty lafaoro
Trondro Neon - famoahana
Fanafody noterena tao amin'ny toeram-pitsaboana ara-pahasalamana: ny vokatry ny debauch an'ny Rahalahy Paris Hilton!
Sakafo miavaka, latabatra ho an'ny sakafo misaraka
Ahoana no hanapahana raozin'ny ririnina?
Mitovitovy amin'ny akanjo
Ny alika dia namonjy an'i Mickey Rourke tamin'ny famonoan-tena
Jellied tavoahangy miaraka amin'ny holatra
Hevitra misimisy - Fanatanjahan-tena
Salady misy ranom-boasary
Ny fandroana ao amin'ny lavaka ao Epiphany - ny tantara sy ny fitsipiky ny fombafomba
Fandikana nofinofy - Lice sy fandikana ny nofinofy
Ahoana no tsy hiantsoantso amin'ilay zaza?
Vovobony maitso eny amin'ny tany